Boggaaga Miyuu Dhiman yahay? Database | Martech Zone
Thursday, April 24, 2008 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Douglas Karr
Ma ogtahay Ka waran macluumaadkaaga? Miyuu boggaagu xallinayaa? Boggaaga iyo bogaggaagu miyey jiraan laakiin keliya waxay u adeegayaan khaladaadka keydka?
Runtii waxaan haysanay tusaale usbuucyo ka hor halkaasoo bartayadu si buuxda u shaqeyneysay, laakiin waxaan ku dhex jirnay arrimo la xiriira tirada isku xirnaanta keydka. Nasiib darrose, waxaan ogaanay macmiil aan faraxsaneyn oo na soo ogeysiiyay. Ma uusan fahmin sababta ay ugu qasabtay inuu noo keeno dareenkeena - wuu saxsanaa!
Kuwii iga horeeyey waxay sameeyeen wax sax ah waxayna la saxeexdeen adeeg kormeer. Waxay ahayd adeeg qiimahoodu qaali yahay $ 49.95 bishiiba. Markii aan galay, isla markiiba waan lumay isku daygii aan ku doonayay laakiin waxaan aakhirkii gartay inaan kaliya xallinayno boggeena guriga. Ma aanan tijaabinaynin shahaado SSL ah, ma aanan tijaabinaynin subdomain-keena, ma hubinayno inay keydka keydka jawaabayaan iyo in kale.
Waxaan si dhakhso leh u bilaabay inaan ku daro jeeg kale oo waxaan ka soo wareejiyay 5 min daqiiqo oo min 1 daqiiqo ah. Markii aan dhagsiiyey in aan soo gudbiyo 'saacadda' cusub, waan naxay markii aan arkay in la iga qaadi doono $ 99 lacag dejin ah iyo $ 49.95 kale bishii. Taasi waa sax - $ 99 oo ah khidmadda dejinta ee wax aan dejiyay !!! Waan baxay oo waxaan bilaabay raadinta adeeg cusub.
Waxaan ku booday Twitter (my mashiin raadin cusub) iyo saaxiib wanaagsan, Ade Olonoh of Waxqabadka soo noqnoqda, ayaa u soo gurmaday. (Baloog dheeri ah - Ade aan yareynin!)
Cade ayaa ii tilmaamay Pingdom. Pingdom waxay leedahay muuqaal aad u nadiif ah oo nadiif ah oo leh astaamo aad u adag. Waxaan barnaamij ka dhigay dhowr ka mid ah API wicitaanada codsigeena si loo hubiyo in keydka keydku socdo iyo ka dib waxaan dejinayaa Pingdom si aan u gudbiyo wicitaanada oo aan u hubiyo jawaabta.
Adeeggu sidoo kale waa macquul. Aasaasiga ahi waa $ 9.95 / mo wuxuuna kuu ogolaanayaa 5 jeeg, 20 farriin SMS ah, emayl aan xadidnayn, waqtiyada shaqada iyo warbixinnada waqtiga la raacayo, jeegaga illaa daqiiqad kasta, HTTP, HTTPS, TCP, Ping iyo jeegaga UDP, iwm Adeegga Ganacsi wuxuu oggol yahay 30 jeeg iyo 200 fariimo SMS ah. Waxay sidoo kale leeyihiin xoog aad u xoog badan API haddii aad jeceshahay inaad isku darto kormeerkaaga.
Baarayaasha baaritaanku waxay ku yaalliin Dallas, Berkeley, Amsterdam, Vasteras, iyo Reading. Waxaan isku dayayaa inaan ogaado haddii Waxaan ku xaqiijiyey Pingdom inaan dhaafin karno SMS adoo si fudud u dhisaya liistada emaylka ee cinwaanada emaylka SMS ee shaqaalaha taleefannada gacanta.
Waxaan sidoo kale u qoray shirkadda codsi muuqaal ah. Waxay noqon laheyd wax cajiib ah haddii, laga reebo Emailka iyo digniinta SMS, ay u oggolaadeen Codsiga HTTP. Tani waxay ii oggolaaneysaa inaan la socdo mid ka mid ah iibiyayaasheena xisbiga 3-aad ee arrimaha soo foodsaarayay beryahan. Haddii aan Pingdom ka codsan lahaa adeegeyga, si otomatig ah ayaan ugu beddeli karaa adeegyadeenna gurmad. Marka nidaamku soo laabto, waxaan haysan lahaa inuu dib u noqdo. Tan waxaan ku sameyn karay email; si kastaba ha noqotee, dib u dhaca ayaa ina qaniin kara.
Waxaa maxkamada inooga haray 29 maalmood. Ilaa iyo inta aynaan arkin wax arrimo ah, waxaan ku boodaynaa xirmada aasaasiga ah. Taasi keligeed ayaa naga badbaadin doonta xoogaa lacag ah oo na siin doonta kormeer ballaadhan oo ballaadhan!
Inbadan oo ku saabsan BlogIN, Video ah
Apr 24, 2008 at 11: 12 PM
Waxaan sidoo kale la yaabay qiimaha qaar ka mid ah adeegyada kormeerka iyo khidmadaha ay qaadayaan. Pingdom waxay umuuqataa adeeg wanaagsan. Waxaan degay AlertBot (qiyaastii isku qiimo ah) ku dhowaad sanad kahor waana ku qancay adeegooda. Maaddaama aad adigu sameysid dhammaan dejinta naftaada oo wax kasta oo kale ay si toos ah uga socdaan halkaas, $ 50 bishiiba waa inay iibsadaan dambiil adeegyo aan caadi ahayn.
Waxaan raadinayaa qaar ka mid ah adeegyadan kormeerka ah si loogu daro barta Twitter-ka ee ogeysiisyada mustaqbalka dhow. Adeegsiga Twitter-ka si tiro kasta oo dad ah ay "u raacaan" digniinta waxay noqon kartaa awood aad u fiican, sidaan qabo.
Apr 25, 2008 at 6: 06 AM
Waad ku mahadsantahay dib u eegista badeecadaas Doug. Fadlan ii soo sheeg sida ay wax u socdaan dhamaadka 30 maalmood. Taasi waxay ku saabsan tahay markii aan qorsheyneyno inaan sidoo kale kormeerkeena galino.
Apr 25, 2008 at 9: 24 AM
Dib u eegis weyn Doug. Adiguna waad dhimatay oo kaliya inaad hubiso heerka dekedda HTTP kuma filna.
Waxaan ku isticmaali jirnay Pingdom Foomka muddo sannad ka badan kuna faraxsan adeegga.
Waxaan dejineynaa jeeg la mid ah - oo laga sameeyay illaa toban daraasadood oo unug ah oo ka dhan ah arjiga iyadoo la adeegsanayo API-ga (tusaale ahaan, foom ayaa la soo gudbin karaa, ma arki karnaa xogta la filayo ee ku jirta keydka, iwm.) Waxaanna soo saari karnaa PASS ama FASHIL xaalad faylka ah . Kadib Pingdom wuxuu ku hubiyaa faylkaas HTTP si loo hubiyo in fariinta lagu dhaho PASS, digniino kale ayaa u baxa sidii waalan.
Apr 29, 2008 at 10: 23 PM
Kaliya waxaan rabaa inaan soo bandhigo 2 adeeg oo dheeri ah - bilaash mon.itor.us iyo lacagta loo yaqaan 'monitis premium' adeegyada kormeerka. Mid ka mid ah faa iidadooda waxaad isku dari kartaa kormeerka culeyska bogga banaanka iyo nidaamyada kormeerka kheyraadka lagana ogeysiiyo kheyraadka nidaamyada hooseeya. Markaa runtii waad firfircoonaan kartaa oo keliya hagaajinta laakiin ka hortagga fashilka. Sii isku day!
Apr 30, 2008 at 7: 57 AM
Kuwani waa xulashooyin runti waxaan haystaa xisaab mon.itor.us ah. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga Pingdom ahaan dalab ahaan waa ka fudud yahay. Waan garan kari waayey sida loo sameeyo jeegaga qaarkood anigoo isticmaalaya mon.itor.us. Waxay u muuqataa monitis in si isku mid ah loo abaabulay.